Endrik'io pejy io tamin'ny 22 Septambra 2020 à 09:02
32 octets supprimés , il y a 1 an
Endrik'io pejy io tamin'ny 24 Febroary 2019 à 14:57 (hanova)
Endrika tamin'ity 22 Septambra 2020 à 09:02 ity (hanova) (esory)
'''Aogositra''' (avyno volana fahavalo amin'ny taona. Avy amin'ny teny anglisy ''August'', izay avy amin'ny teny latina hoe ''Augustus'') noio volanaanarana fahavalo amin'ny taona iray, faio. taoTeo aloha dia ny volana fahenina tamin'ny herintaonan' ny [[Romana]], ary Sextilis no narany taloha. Taoriana dia novana ho Aogositra ny anarany. Ary ny anton'ny teny Aogositra dia izao : Raha maty [[Joliosy Kaisara]] ny zanak' anabaviny na rahalahiny nandimby azy, Oktaviosy no anarany. Manamboninahitra nalaza indrindra tamin'ny fomban'ny ady izy; ary rehefa nanjaka izy, dia nataony anarany ny hoe [[Kaisara Aogostosy]] (''"malaza"'', hajaina, izany.) Ary rehefa izany indray, dia novany ny anaran' ny volana Sextilis ka hatao hoe Aogositra, toa fahatsiarovana ny Kaisara Aogostosy.
Raha maty [[Joliosy Kaisara]] ny zanak' anabaviny na rahalahiny nandimby azy, Oktaviosy no anarany. Manamboninahitra nalaza indrindra tamin'ny fomban'ny ady izy; ary rehefa nanjaka izy, dia nataony anarany ny hoe [[Kaisara Aogostosy]] (''"malaza"'', hajaina, izany.) Ary rehefa izany indray, dia novany ny anaran' ny volana Sextilis ka hatao hoe Aogositra, toa fahatsiarovana ny Kaisara Aogostosy.
Emperoran'ny Romana izy tamin'ny andro nahaterahan'i [[Jesoa Kristy]]. Fa tsy nanao soa loatra an'i Kristy, tsy nanao ratsy taminy, Aogostosy. Fa nisy zavatra nataony izay nahagaga ny sasany. Nisy tempoly natao hoe Tempolin'i Janus; ary raha nisy ady tamin'ny Romana dia novohany ny varavarana rehetra tamnin' izany tempoly izany, fa [[Fanompoan-tsampy|nivavaka tamin'ny sampy]] ny olona. Ary kosa, raha tsy nisy ady dia narindrina ny varavarany rehetra, fa angamba tsy nisy olona nahita azy mirindrina talohan'izany andro izany. Fa raha teraka Jesosy Kristy, izay lazain'ny Kristiana fa Zanak' Andriamanitra, Tompon'ny Fiadanana, dia nandry tsara ny firenena rehetra amin' izao rehetra izao. Tsy nisy ady na tamin'ny Romana aza, dia narindrin'i Kaisara Aogostosy ny varavarana rehetra tao amin'ny Tempoly Janus, ary dia faly ny olona maro.▼
▲Emperoran'ny Romana izy tamin'ny andro nahaterahan'i [[Jesoa Kristy]]. Fa tsy nanao soa loatra an'i Kristy, tsy nanao ratsy taminy, Aogostosy. Fa nisy zavatra nataony izay nahagaga ny sasany. Nisy tempoly natao hoe Tempolin'i Janus; ary raha nisy ady tamin'ny Romana dia novohany ny varavarana rehetra tamnintamin' izany tempoly izany, fa [[Fanompoan-tsampy|nivavaka tamin'ny sampy]] ny olona. Ary kosa, raha tsy nisy ady dia narindrina ny varavarany rehetra, fa angamba tsy nisy olona nahita azy mirindrina talohan'izany andro izany. Fa raha teraka Jesosy Kristy, izay lazain'ny Kristiana fa Zanak' Andriamanitra, Tompon'ny Fiadanana, dia nandry tsara ny firenena rehetra amin' izao rehetra izao. Tsy nisy ady na tamin'ny Romana aza, dia narindrin'i Kaisara Aogostosy ny varavarana rehetra tao amin'ny Tempoly Janus, ary dia faly ny olona maro.
Fantantsika fa maina ny tany aty [[Imerina]] raha tonga ny volana Aogositra. Ary malemilemy kokoa ny tazo noho ny amin'ny andro sasany. Ary mamboatra ny tanim-bary mba hanetsa ny vary vakiambiaty ny olona, raha tonga ny volana Aogositra.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/wiki/Manokana:MobileDiff/997347"